नेकपा ओली समूहको सभा : खाजा र २ सय भत्ताको लोभमा सिरक ओढेर आए जनता ! « Rara Pati
नेकपा ओली समूहको सभा : खाजा र २ सय भत्ताको लोभमा सिरक ओढेर आए जनता !
१३ माघ, सप्तरी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले सप्तरीको राजविराजमा आयोजना गरेको कठ्याङ्ग्रीने चिसोमा सिरक आढेर सहभागी भएका छन् । आमसभामा सहभागी हुनेलाई खाजा र २ सय भत्ताको व्यवस्था गरिएको थाहा पाएपछि हुस्सु र अचाक्ली जाडोको प्रवाह नगरी सप्तरीबासी कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन् ।
आज (मंगलबार) दिउँसोको २ बजे सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा घाम लागेको थिएन । कुहिरोले डम्म ढाकेको अवस्थामा राज रंगशालामा उपस्थित स्थानीयको हुलिया हेर्दा जाडोबाट जोगिन घरमा जे भेटिन्छ त्यहि ओढेर आएको देखिन्थ्यो । घाम पटक्कै नदेखिएकाले चिसो हावाको सिरेटोले कतिजना कठ्यांग्रिरहेका थिए ।
खाजा र दुई सय भत्ताको आशमा यही रंगशालामा थिए सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ नकटीरायपुरका भोला सदा । कार्यक्रमबारे बेखबर अन्दाजी ५० बर्षका देखिने भोलासहित १५ जनालाई २ सय रुपैयाँ र खाजा खुवाउने लोभ देखाएर ट्याक्टरमा राजविराज ल्याइएको रहेछ ।
उनले जाडोमा कुनै काम पनि नपाउने भएकाले खाजा र थोरै भएपनि पैसा आउछ भनेर कार्यक्रममा आएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ दिने र खाजा दिने भन्दै हामीहरूलाई यहाँ ल्याइएको छ । अहिले जाडोमा कुनै काम पनि पाउँदिनँ । कम्तिमा २ सय रुपैयाँ त आउँछ भनेर आएको हुँ ।’
कार्यक्रमा उपस्थित केहिलाई त आफु कुन पार्टीको कार्यक्रममा बसेर भाषण सुननिरहेको छु भन्नेपनि थाहा रहेनछ । कुन पार्टीको कार्यक्रममा आउनुभएको हो भन्ने सवालको जवाफमा भोला सदाले भने, ‘माओवादीको कार्यक्रममा !’
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न नेकपाका सचिवालय सदस्यसमेत रहेको उपप्रधानमन्त्री इश्वर पाखरेल राजविराज पुगेका थिए । उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक भएको बताउदै तोकिएको समयमै चुनाब हुने दाबी गरे ।
उपप्रधानमन्त्री इश्वर पाखरेल
खाजा र २ सय भत्ता